Ken Gburu Ebel Nwanne Ya n’Ihi Iwe | Ihe E Ji A Kụziri Ụmụaka Baịbụl
O Gburu Nwanne Ya n’Ihi Iwe
Adam na Iv mụrụ ọtụtụ ụmụ mgbe ha si n’ogige Iden pụta. Nwa mbụ ha aha ya bụ Ken bụ onye ọrụ ugbo. Nwa ha nke abụọ aha ya bụ Ebel na-azụ atụrụ.
Otu ụbọchị, Ken na Ebel chụụrụ Jehova àjà. Ị̀ ma ihe àjà bụ? Ọ bụ onyinye pụrụ iche a na-enye Jehova. Jehova nabatara àjà Ebel, ma ọ nabataghị nke Ken. Nke a mere ka Ken wee ezigbo iwe. Jehova gwara Ken na iwe ọ na-ewe nwere ike ime ka o mee ihe ọjọọ. Ma, Ken egeghị Jehova ntị.
E mechaa, Ken gwara Ebel, sị: ‘Ka anyị gaa n’ọhịa.’ Mgbe ha nọ n’ọhịa, Ken kụgburu ya. Gịnị ka Jehova mere Ken? Ọ tara Ken ahụhụ. Otú o si mee ya bụ na ọ chụpụrụ ya n’ụlọ ha, chụga ya ebe dị anya. A gaghị ekwe ka Ken laghachi n’ụlọ ha ọzọ.
Gịnị ka anyị ga-amụta n’akụkọ a? Anyị nwere ike ịna-ewe iwe ma ọ bụrụ na ihe anaghị aga otú anyị si chọọ. Ọ bụrụ na anyị ana-ewe iwe, ma ọ bụ na ndị ọzọ achọpụta na anyị na-ewe iwe ma gwa anyị kwụsị ya, anyị kwesịrị ịkwụsị ya ozugbo tupu iwe ahụ emee ka anyị mee ihe ọjọọ.
Jehova na-echeta Ebel n’ihi na o mere ihe dị mma, hụkwa Jehova n’anya. Chineke ga-akpọlite ya n’ọnwụ mgbe ọ ga-eme ka ụwa a bụrụ paradaịs.
“Buru ụzọ mee ka gị na nwanne gị dị n’udo, mgbe ị bịaghachikwara, nye onyinye gị.”​—⁠Matiu 5:24
Ajụjụ: Ole ndị bụ ụmụ abụọ mbụ Adam na Iv mụrụ? Gịnị mere Ken ji gbuo nwanne ya?
Jenesis 4:1-12; Ndị Hibru 11:4; 1 Jọn 3:11, 12
Olee Ihe Akụkọ Ken na Ebel Na-akụziri Anyị?
Bipụta foto a, gụọ amaokwu Baịbụl ndị e dere na ya, detọpụkwa ihe ndị a na-edechaghị.
Olee ihe anyị nwere ike ịmụta banyere Ebel na okwukwe ya ebe ọ bụ na Baịbụl ekwughị ọtụtụ ihe banyere ya?
Kaadị Akụkọ Ebel
Olee ihe Ebel mere ka ya na Chineke nwee ike ịdị ná mma? Bipụta kaadị a ka ị matakwuo gbasara Ebel.